Hawaii waxay dib ugu furaysaa booqdayaasha socdaalka dalxiiska xeerar cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » Hawaii waxay dib ugu furaysaa booqdayaasha socdaalka dalxiiska xeerar cusub
Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • HITA • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Kamaainas • News • Dib-u-dhiska • jiga • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Hawaii dib u fur
Dadka soo booqda Hawaii waxaa lagu soo dhaweyn doonaa gacmo furan iyo Aloha mar labaad laga bilaabo Nofeembar 1.
Badhasaabka Hawaii David Ige ayaa maanta ku dhawaaqay in Aloha Gobolku wuxuu diyaar u yahay inuu soo dhaweeyo booqdayaasha safarka aan muhiimka ahayn laga bilaabo Noofembar 1, 2021.
Guddoomiyuhu wuxuu caddeeyay inay ku dhiirri -gelinayaan wixii ay arkeen dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay iyadoo ay sii soconayaan tirooyinka kiisaska hoose.
Nidaamka daryeelka caafimaadka ee Hawaii ayaa ka jawaabay, gobolku hadda wuxuu awood u leeyahay inuu hore ugu socdo soo kabashada dhaqaalaha.
Ige wuxuu caddeeyay inay hadda ammaan u tahay degganeyaasha iyo booqdayaasha si buuxda loo tallaalay inay dib u bilaabaan safarkii aan muhiimka ahayn ee ay ku tegi jireen iyo gudaha Gobolka Hawaii.
Hadday tahay dalxiis ama degane, socdaalayaasha la tallaalay oo raba inay u safraan gudaha iyo dhexdooda si madadaalo ah - ama ganacsi - mar kale lagu soo dhaweeyo Hawaii.
Guddoomiyuhu wuxuu sharraxay: “Waxaan u malaynayaa in dhammaanteen ay nagu dhiirri -gelinayaan wixii aan aragnay dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay iyadoo ay sii soconayaan tirooyinka kiisaska hoose. Isbitaalladeenna ayaa si fiican u shaqeynaya, waxaana ku jira bukaanno COVID oo yar. Tan ugu muhiimsan, nidaamkayaga daryeelka caafimaadka ayaa ka jawaabay, waxaanan awood u leenahay inaan hore ugu socono soo kabashada dhaqaalaha. Sababtaas awgeed, hadda waa badbaado u leh dadka si buuxda loo tallaalay iyo booqdayaasha si ay dib ugu bilaabaan socdaalka aan muhiimka ahayn iyo gudaha Gobolka Hawaii. ”
Waxay ahayd 3 toddobaad uun ka hor markii Guddoomiye Ige uu codsi u jeediyay dalxiisayaasha inay sugaan ilaa waqti dambe si ay u soo booqdaan. Waqtigaas ayuu sheegay in amarrada degdegga ah ee lagu nidaaminayo socdaalka ayaa sii jiri doona ugu yaraan 2 bilood oo kale.
Isbahaysi ka kooban wakiilo ka socda socdaalka, dalxiiska, qaybaha martigelinta iyo sidoo kale hawl -wadeennada tafaariiqda, gaadiidka cirka iyo dhulka, iyo qaar kaloo badan ayaa dabada ka riixayay in la furo 1 -da Nofembar oo ay weheliyaan Madaxweynaha iyo Maamulaha Ururka Hoyga iyo Dalxiiska ee Hawaii, Mr. Mufi Hanneman.
Caaqilku wuxuu yiri: “In kasta oo aan garowsannahay inay weli jiraan tafaasiil u baahan in la kala saaro - iyadoo la bixinayo maanka gaarka ah si ay talo uga helaan maayarada gobollada iyo macluumaadka ay bixiyeen bulshada daryeelka caafimaadka iyo waaxda ganacsigu - ogeysiiskani waa tallaabo muhiim ah oo ugu horreysa xagga helitaanka dhaqaalaheennu mar labaad si nabad ah oo xalaal ah ayuu u socdaa. Waxaan rajeyneynaa inaan la shaqeyno Gov. Ige iyo maamulkiisa si ay u qaabeeyaan farriin cad safrayaasha mustaqbalka in Hawaii ay u furan tahay ganacsi oo safar mar kale lagu ballansan karo kalsooni. ”
Sida Duqa Jaziiradda Hawaii Mitch Roth uu u dhigay, the Aloha Gobolku wuxuu rabaa “socdaalayaal caafimaad qaba, oo la tallaalay inay sida ugu dhakhsaha badan ugu noqdaan Hawaii.”